Multivitamin: Chii ichocho? Ndezvipi zvakanakira? Sei kutora?
Kuwedzeredza: Chii icho? Sei usinga pfuure? Ndezvipi zviratidzo? Chii chokudya?
Kudya kweJapan: Kunoshanda Sei? Iine chero mhedzisiro here? Dzidza zvese nezve iyi inokurumidza uremu nzira!
utano	 1 December 2018
Multivitamin: ndeyei? Sei kutora? Zvakakosha here kumuviri?
Miviri yedu inoda zvinovaka muviri kuti igare zvakanaka uye iine hutano. Asi sezvo isinga gadzire zvese izvi zvinovaka muviri zvainoda, isu tinofanirwa kuzviwana kuburikidza nekudya kwakaringana kana kunyangwe kuburikidza nekuwedzera, ndosaka kushandiswa kwemamultivitamini kuri kuramba kuchiwedzera.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve multivitamin, chinyorwa ichi ndechewe, gara nesu uye bvunza yako yese mibvunzo nezvazvo!
Chii chinonzi multivitamin?
MaMultivitamini anozivikanwawo sekuti multivitamini anoverengeka emavitamini akakosha emuviri wedu ayo anotengeswa kuzadzisa zvido zvemicronutrients apo chikafu hachigone kusvika pane zvese zvinovaka muviri.
Kupesana nezvinofungwa nevanhu vazhinji, iyo multivitamin haingopi chete kushomeka kwevhithamini, asi inoshandawo seyakasimba immune system booster, nokudaro iine chiito chekudzivirira pazvirwere zvakasiyana siyana nekuvandudza hupenyu hwemunhu.
Tinogona kutaura kuti ma multivitamini anoshanda kupa izvo zvakasiyana zvidikanwi zvevhitamini nemaminerari izvo zvinoda muviri kuita kwayo kwakakwana mashandiro, asi izvo zvisina kugadzirwa mumuviri pachawo uye izvo zvisingawanzo kudyiwa nekuda kwekusiyana kwakasiyanasiyana kwechikafu.
Zvese mune zvese, muviri wedu unoda zvinopfuura gumi nemashanu zvicherwa uye zvinowanzove zvisingaite kuti uzviwane zvakasikwa nehunhu hwadzo uye huwandu, hunosiya muviri kunyanya usina iron, chromium, magnesium, mhangura, ayodini, selenium, zinc, calcium , manganese nevamwe, vachigadzira nzvimbo yeakasiyana hutachiona nezvirwere.
Uye ndosaka kushandisa vhitamini uye mamineral ekuwedzera kuchikosha.
Ndezvipi zvakanakira multivitamin?
Pasina kufunga nezvese makemikari e multivitamin, isu tinofumura mamwe mabhenefiti makuru anowanikwa kubva mukushandisa kwayo:
Inovandudza kuona, ganda, mazino uye zvipikiri, nekuda kwe vitamini A;
Kushanda zvirinani kwemajoini uye zvekare eiyo circulatory system;
Kuvhara iyo hormone cortisol iyo yakabatana zvakananga nekatabolism;
Kukura kwehomoni kuburitswa;
Uropi huri nani uye zviitiko zvemwoyo;
Kuderedzwa kweanotyisa mahara radicals, anova maajenti anorwisa muviri;
Kuvandudzwa kwemaseru kunyanya kuburikidza nekuita kwevhitamini A uye D mukuumbwa kwemasero matsva;
Kugadziridza kwemetabolism sezvo iine mavitamini kubva B yakaoma.
Kazhinji, hapana kunetsekana nezvekuti ungashandise sei ma multivitamini, asi kurudziro chete yekuwana zvakanakisa mu multivitamin ndeyekuishandisa zuva nezuva pamwechete.Pane kudya kwakasimba, kunyanya kunobva mafuta, nekuti mavitamini A, D , E uye K zvinosungika kunyanya mumhando iyi yezvinovaka muviri, uye tsaona dzinogadzirwa nedumbu dzinogona kubatsira mukugaya kwechikafu uye zvakare dzinofarira kuputsika uye kunwiwa kwezvimwe zvinovaka muviri zviripo muma multivitamini.
Kuti uwedzere kuwedzera kushandiswa kwechigadzirwa ichi zvinokurudzirwa kuti uishandise mushure mekudzidzira kwekudya kwako kwekutanga, kunamatira pane iyo purogiramu pazvinogoneka.
Mienzaniso yekudya kwakasimba nemafuta kutora nemultivitamin:
Mupunga une nyama tsvuku;
Pancake nepeanut butter uye bhanana;
Omelet ane mazai akazara uye oatmeal.
Asi zvinogara zvakakosha kuti ubvunze chiremba, kuti akwanise kukuudza nzira yakanakisa yekushandisa iyi komputa yemavhitamini uye mamineral kuti awedzere kutora kwekubatsira kwayo.
O lavitan mutsetse wakazara wemavhithamini, ane anopfuura makore gumi mumusika uye zviri pachena kuti ndeimwe yemhando dzinonyanya kushandiswa munyika.
Lavitan inopa multivitamin kunyanya kune yega yega mhando yechinangwa, uye pasina kupokana ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa nhasi, sezvo iwe uchagara uine chigadzirwa chine mishonga inodiwa nemuviri wako panguva ino.
Chimwe chinotungamira chiratidzo kana zvasvika kune multivitamini ndiyo Centrum, ine mutsetse wakazara wemavhitamini uye mamineral kusangana nemhando dzese dzemuviri dzinoda.
Nekushandisa ichi chigadzirwa zvinokwanisika kuti iwe uve nekomboni yakazara kuzadzikisa zvido zvemuviri wako.
Ndeipi multivitamin yandinofanira kusarudza?
Ose maLavitan neCentrum akanakisa multivitamini. Naizvozvo, chero eiri mabhii maviri aya anobatsira kukuunzira mhedzisiro inotarisirwa, zvisinei, kana usina chokwadi kuti ndechipi chakanakisa, tinokurudzira kuti uongorore kuti ndechipi chinonyatsoenderana nezvinodiwa nemuviri wako.
Pachine mimwe mibvunzo here? Siya mhinduro!
Zvigadzirwa zvebvudzi rakamonana: Tsvaga zvakanakisa uye zvinodhura!
Chikafu chinobvumidzwa pane iyo Low Carb Kudya: Zvese zvaunoda kuti uzive kuti zvisakanganise pane kudya!
Soybean Oiri: Zvakaipa Here? Inogona kushandiswa pane bvudzi here?
Yakanakisa gyms muRio: Tarisa uone yedu runyorwa!